About Us - Zhejiang Feileisi korontada Co., Ltd
Auto Fiilooyinka la habeeyo
Zhejiang Feileisi korontada Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2008, waa soo saaraha ah xirfadeed ee Relays baabuurta, iftiin bixiya, daaro, dareemayaal, contactor DC, suunka fiilooyinka korontada iyo alaabooyinka kale ee baabuurta.
Shirkadda maray ISO / TS16949: shahaado nidaamka 2009 tayada sannadka 2015. waxyaabaha The kormeerka maray xarunta imtixaanka qaybo auto ka Ningbo, helay shahaado SGS-ROHS, Midowga Yurub shahaado CE oo codsatay daraasiin shatiyada wax soo saarka.
Shirkadda ayaa "FOOCLES" brand, "FEILEISI" waxyaabaha brand, waxaa fadilay by its tayada deggan oo kharash-ool ah suuqa ugu fiican. La dhoofiyo Europe, Americas, Bariga Dhexe, Koonfur-bari Eeshiya iyo qaybo kale oo aduunka ah. Iyada oo dadaal Assesment dhammaan shaqaalaha, "ayuu FOOCLES" Brand waa si fiican u yaqaan in tallaabo baabuurta korontada warshadaha talaabo.
Si diiran u soo dhaweyn saaxiibo ka adduunka oo dhan u yimaadeen inay booqdaan Shirkadda, xaajooto ganacsi, la xoojiyo iskaashiga farsamo, waxaan ku farxi doonaa inuu kuu adeego.
iyo xeerarka kormeerka, sixitaanka, baakadaha, kaydinta iyo kaydinta of Relays Ujeedada guud ee baabuurta. Heerka Tani waxay khusaysaa circuit DC xiriir farsamo Relays electromagnetic baabuurta (oo ay ku jiraan fur-in smal ...
E-Address Zhejiang FEILEISI TECHNOLOGY KORANTADA CO., LTD.
Telefoon: + 86-577-61755310